China agglomerator pelletizing muchina vagadziri nevatengesi Kupfuma Mashini
Conveyor: taura PP Pe firimu kana maflakes mu compactor / feeder. Pe firimu compactor: kupwanya uye kumanikidza firimu, andfeedcompressed firimu mu extruder kumanikidzwa, kuita kuti iko kugadzirwa kugona kwakakwira uye kugadzikana. Inowedzera system: yekugadzirisa zvinhu uye inonetesa gasi.
2.Type: mvura-mhete pelletizing uye kumira mhando
pp pe firimu pelletizing mutsetse / Plastiki firimu granulator
Iyi mvura-inotonhorera imwechete sikuruu epurasitiki pellet inogadzira muchina ndeimwe nhanho epurasitiki inogadzirisazve pelletizer, iyo inokodzera marudzi mazhinji epurasitiki marara ekushandisa zvekare uye kugadzira pellet, senge PP, HDPE, LDPE, LLDPE Firimu EVA uye PE furo uye yakachena yakarukwa / isina kurukwa bhegi zvinhu, nezvimwewo. Iyo firimu inogona kumanikidzwa mu compressor uyezve ipetwe, haidi crusher muchina.
Uye zvakare yakagadziridzwa dhizaini, inoita shuwa kuti muchina uyu une hupenyu hurefu hwekushanda uye kugona kwehupfumi mukushandisa.a
1. Screw uye dhiramu zvakagadzirwa ne38CrMoAlA kana Bi-metallic, inlet muromo unorapwa neakasarudzika chiwanikwa: yakasimba kwazvo uye yakareba hupenyu.
2. Easy oparesheni: ine otomatiki kugara tembiricha kudzora uye kugadzikana mashandiro, Mushure mekugadzirisa mushe, 1 kana vaviri vashandi vakakwana kumhanyisa muchina uyu, kupa izvo zvekushandisa uye kuchinja pellet inogamuchira.
3.Mutengo wakaderera pakushandisa mushure mekugadzirisa patsva: ikozvino muchina wemhando iyi unowedzera hupfumi musimba remagetsi uye zvakare mvura. Muhupenyu hwakareba hwekushanda hwemuchina uyu, unogona kuchengetedza akawanda masosi musimba!
4. Yakakwira kuburitsa, hupenyu hurefu hwekushanda uye ruzha ruzasi: ndiyo yakanaka marara epurasitiki anovandudza pelletizer muchina wemazuva ano.
Kune ese uyu muchina isu tine ruzivo rwakawanda mauri pamusoro pemakore gumi, shamwari yangu, ingonditumira email, ini ndichakupa kukosha zano uye ndopa chinopihwa chaizvo zvichibva pane zvaunoda.
Agglomerator muchina une mvura yekucheka: kudzokorodza PE PP firimu uye dzakarukwa mabhegi.
Agglomerator Pelletizing muchina Huru PP firimu kukanya muchina epurasitiki granulator
Muchina wese, tinoita isu pachedu kudzikisa mutengo wevatengi vedu.
2.Genuine chigadzirwa chakanakisa mhando
Isu tinosarudza zvinhu zvedu zvakanyanya.
Zvese zvinhu zvinouya kufekitori yedu zvinofanirwa kupasa iyo yemhando bvunzo
Zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvinodzoserwa kumutengesi.
3. Ma Engerneers anowanikwa ekushandira mhiri kwemakungwa
Kambani yedu inopa chete munguva yekuendesa neyakagadziridzwa cheni yekutengesa.
Isu tinotora kutarisisa kwakasimba kune yega yega ruzivo mukugadzira maitiro.
Iko kudzora kwemhando mufekitori yedu kwakanyanyisa.
Zvese zvisina kukwana semi-inogadzira inofanirwa kurapwa zvakare kana kurambwa.
Muchina wese unofanirwa kuongororwa usati waendesa kumutengi wedu.
Chatinoda kuita kupa mutengi wedu chigadzirwa chemhando yepamusoro chine hupenyu hwakagadzikana uye hwakareba hwekushanda.
Pashure: yakafanana mapatya sikuruu extruder
Zvadaro: PP Inonyungudika Yakaridzwa